Motorcycle Buyers Guide – Suzuki VS800 Intruder, VZ800 Marauder, VL800 Volusia | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34606)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10893)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9476)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7958)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7206)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7129)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (6998)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6139)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5667)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5447)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5360)
Home → ဆူဇူကီး → Motorcycle Buyers Guide - Suzuki VS800 Intruder, VZ800 Marauder, VL800 Volusia
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဝယ်လမ်းညွှန် – Suzuki VS800 Intruder, VZ800 Marauder, VL800 Volusia
25 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 | စာရေးသူ: dima | Comments Off on မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဝယ်လမ်းညွှန် – Suzuki VS800 Intruder, VZ800 Marauder, VL800 Volusia
Take home the Intruder 800 and experienceatrue cruiser that is just as comfortable around town as on the open road. -ဆူဇူကီး
A fuel tank-mounted speedometer with LCD fuel gauge, clock and indicator lights are conveniently located for easy reference. Clear-coated paint, lustrous chrome and uncommon attention to detail give the Volusia 800 an exceptional presence. The new fuel tank emblem makes for an attractive finishing touch. -ဆူဇူကီး
The Volusia VL800 and VL800SE, think of them as your freedom finders. -ဆူဇူကီး
Its general behaviour is also at least equivalent to the class average, တနည်း. solid and friendly, while its performance level is balanced and pleasant, if not astounding.
MBG Says: Intruder 800 (Rating 6.5/10) We sincerely believe the Intruder 800 could become very interesting, if it were skillfully and profoundly updated. But for the moment, there are simply too many other choices on the market that offer much fresher styling, better-balanced, friendlier handling atamuch lower price for it to representareally interesting buy. ဒါကြောင့်, unless it’s particular styling has you madly in love with it, it’s just better to look elsewhere.
MR says: The Intruder 800 basically wasacombination of the VX800 engine (which itself was based on the Intruder 750 motor), and the Intruder 750 chassis. The engine in the 750 was already the strongest in its class, ပြီးနောက် 800 motor took it one step further ahead. As with most cruisers, the Intruder would complain when pushed too hard.
The suspension and chassis were more suited to cruising the boulevards than to spritely speed sessions in the hills. It was all too easy to start scraping the underbelly. မှစ. 1992, the Intruder has not had many changes, other than paint chrome.
Despite the lack of changes, the Intruder, အထိ 1996 at least, was Suzuki’s best selling cruiser.
20.06.2015 | Comments Off on Drysdale 2x2x2- 2WD ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
20.06.2015 | Comments Off on 2013 ဆူဇူကီး Burgman 400 ထိပ်တန်းနယူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်
19.06.2015 | Comments Off on မိသားစုဆရာဝန်ရဲ့ဂန္ထဝင်သံမဏိ #63: 2005 ဆူဇူကီး RM250 PulpMX
19.06.2015 | Comments Off on အဆိုပါ GSResources – Stator သတင်းစာများကငါ – စနစ်များကိုအားသွင်း GS အပေါ်တစ်ဦးက primer
19.06.2015 | Comments Off on ကျနော်တို့စမ်းသပ်: ဆူဇူကီး SFV 650 Gladius – သေးငယ်တဲ့ crank (ဓာတ်ပုံကို, ဗီဒီယိုက) Mosaicsallthewa…
19.06.2015 | Comments Off on လောင်စာဆဲလ်အစိမ်းရောင် Tech မှအပေါ်ဆူဇူကီး Burgman Scooter ပြေး – က CNET သတင်း
19.06.2015 | Comments Off on 2006 ဆူဇူကီး SV650 vs Ninja 650R – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Bajaj Discover Brammo Enertia ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး AN 650 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Ducati Desmosedici GP11 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Diavel Ducati 60 စမတ် eScooter မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဟွန်ဒါ DN-01 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype